Siyaasadda Muufeysiga | KEYDMEDIA ONLINE
Faallo Xasan Mudane
Waxaa abuurmay dhaqan ah in qofka looga faa’ideysto duruuftiisa dhaqaale isaga oo lagu soo xiro gelinaya lacag iyo jago. Halkaas waxaa ka dhalanaysa in siyaasadda laga muufeysto!
Siyaasadda muufeysiga waxaa inta badan isticmaala madaxda markaas xukunka joogta iyaga oo qofka siinaya lacag ama kursi, laakiin qofkaas waxaa laga rabaa in uu noqdo CBB farta ka xiran.
Marka laga soo tego siyaasadda, waxaa jira dad badan oo markoodii hore ahaa kuwa u ololeeya danta bulshada laakiin gadaal dambe iska beddelay. Tusaale, afar sano ka hor wuxuu ahaa qof difaaca xorriyadda hadalka iyo saxaafadda laakiin maanta wuxuu ka shaqeeyaa madaxtooyada, wuxuu taagan yahay waa in gacan bir ah lagu qabtaa cid kasta oo wax ka sheegaysa dowladda.